Waraana Tigraay: Haleellaan xiyyaaraa lubbuu namootaa galaafate – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaraana Tigraay: Haleellaan xiyyaaraa lubbuu namootaa galaafate
Kanneen haleellaa kanaan miidhaman Hospitaala guddicha Maqalee Ayidaritti wal’aanamaa jiru
Tigraayitti bakka dhiyeenya magaalaa Maqaleetti argamtu Togoogaa jedhamtutti, haleellaan xiyyaaraa lubbuu namootaa galaafachuu namoonni ijaan argine jedhan BBCtti himan.
(bbc)–Haleellaa qilleensarraa kanaan namoonni 43 miidhamuu doktora achi turan waabeffachuun Rooyitars gabaaseera [Afaan Igiliziitti si geessa].
Haatahu malee, namoonni meeqa lubbuu akka dhaban gabaasicha keessatti hin ibsamne.
Haleellaan magaalaa Maqaleerraa km25 bakka fagaattutti tahe kun waraana mootummaan raawwate jedhu namoonni ijaan argan.
Raayyaan Ittisa biyyaa garuu himannaa kana waakkateera. ”Haleellaa qilleensarraa kan gaggeessine garee shororkeessitootaa dhabamsiisuuf malee, namoota nagaarratti miti,” jedhan dubbi himaan waraana biyyattii.
Paarlaamaan Itoophiyaa dhiyeenya kana TPLF tarree shororkeessitootaa jalatti galmeesseera.
Kanneen ijaan argan maal himu?
Dargaggoon umuriinsaa waggaa 16 taheefi magaalaa Maqaleetti kan argamu Hospitaala Ayidaritti wal’aanamaa jiru BBCtti akka himetti, furguggee caccabaan harkasaarra miidhaan geessisuu hima. Kana malees, namoonni hedduun lafarratti kukkufanii arguufi namni inni beeku tokko haleellaa kanaan du’uu dubbata.
Dubartiin hospitaalatti miidhamtee yaalarra jirtu biraas, haleellichaan booda haalli ture baayyee kan sodaachisu ture jechuun, namoota lafarratti kukkufan arguushees himte.
Doktarri hospitaala keessa hojjetu tokko akka himetti, namoota miidhaman torbaaf yaalii gochaa akka ture himuun, ogeeyyiin fayyaa gara bakka haleellaan itti raawwatame sana deemuun kanneen miidhaman akka hin qarqaarreef dhorkamaa jiru jedha.
Dubbi himaan Raayyaa Itoophiyaa Koloneel Geetinnet Aaanee akka himanitti: ”Iddoo gabaatti haleellaa xiyyaaraa hin gaggeessine. Kun akkamiin tahuu danda’a? Waraanni [keenya] iddoowwan barbaadu qiyyaaffatee haleeluuf humna qaba.”
Dhalattoonni Tigraay biyyoota garagaraa jiraatan waraana Tigraayitti gaggeeffamu mormuun hiriira bahu
”Haleellaa qilleensarraa gaggeessineerra, garuu iddoowwan adda bahan muraasatti. Gabaa keessatti raawwatame jedhamee kan haasawamu dhugaarraa kan faagateedha.”
Guyyaa darbe keessa daandiin guddichi Maqalee keessaa gara kaabaa deemsisu guyyoota lamaaf cufaa turuu, jiraataan magaalaa Addigraat BBCtti himaniiru.
Kibxata ganama keessa humnoonni Tigraay magaalaa Addigraat kan seenanii turan oggaa tahu, waraanni Itoophiyaafi Ertiraas boodarra magaalattii seenaniiru.
Akka jiraattonni BBCtti himanitti, guyyoota dhiyeenyaan asitti lolli haarayaa tahe kaaba magaalaa Maqaleetti dhalateera.
Akka namoota ijaan argine jedhanitti, loltoonni paartii naannichaa aangoorraa gugsameef amanamoo tahan, magaalota garagaraa seenaniiru jedhanis, waraanni Itoophiyaa garuu kana ni haala.
MM Itoophiyaa Abiy Ahimad finciltoonni TPLF Sadaasa 3, 2020 ajaja waraanaa kaaba biyyattiitti argamu haleeluun, loltoota ajjeesanii meeshaalee waraanaas saaman jechuun himatu.
Kanaanis mootummaan Itoophiyaa duula seera kabachiisuuf waraana bobbaasuuf dirqamuu himu.
TPLF ammoo haleellaan kun balaa dhufu jalaa ofbaraaruuf tarkaanfii fudhatamedha jedha.
Waraana erga jalqabamee baatii saddeetiif adeemu kanaan namoonni kumootaan lakkaa’aman ajjeeffamanii miliyoonotaan kan lakkaa’aman ammoo buqqa’aniiru.
Lola Tigraay: Battala Maqaleetti haleellaan xiyyaaraa qaqqabe